KAOMININA BELOBAKA : Novatsiana masomboly ireo fikambanam-behivavy tao an-toerana
Ny sampan-draharaha misahana ny fambolena sy ny fiompiana ato amin’ny faritr’i Boeny no tompo-marika tamin’izany, izay notarihin’i ramatoa Baofeno Micheline, talem-paritra. 3 octobre 2017
Efatra karazana dia ny kokombra, ny kaorizety, ny voatabia ary ny voan’ny petsay no nozaraina tamin’izany araka ny tetiandro mifanaraka amin’izao fotoana izao. Tanjon’ny minisitera rahateo, hoy ny talem-paritry ny fambolena dia ny hampakatra ny harinkarena ny tantsaha mba hahafahany mivelona amin’io seha-pihariana efa nahazatra azy io.
Fikambanam-behivavy miisa valo no nisitraka io voan’anana io, noho izy ireo efa nahazo fiofanana manokana tamin’ny cragri, sy ny csa, ary hampiarahana amin’ny fanaraha-maso ireo zavatra novatsiana ireo. Fa ankoatr’izay, dia ny nahazendana ny nahitana fa afaka mamokatra karaoty ihany koa ny ao Belobaka satria dia efa namatsy ny ampahan’ny tsena teto Mahajanga izy ireo, hoy ireo mpamboly felika ao an-toerana ihany.
Fa tsy ireo efatra karazana ireo no masomboly nozaraina fa mbola hoavy ny karazana hafa arakaraka ny tetiandrom-pambolena, hoy ny talem-paritry ny fambolena sy ny fiompiana raha nampanantena ireo tantsaha. Mbola hitohy ao min’ny kaominina Ambalakida sy Betsako izao fanomezana masomboly atao ambezo izao afaka andro vitsy , hanampiana ireo tantsaha mba hahafahany mihoatra eo amin’izay seha-pihariana ivelomany izay.
Hanampy amin’ny fitadiavana ny lalam-barotra ihany koa ny tompon’andraikitra ny amin’izany ary hanome amin’ny firaovana, toy ny fanondrahana sy zezika izay nangatahan’ireo tantsaha ireo ihany koa. " Famokarana mitodika amin’ny tsena" rahateo no filamatry ny minisitera mpiahy ity fambolena ity eto Mada- gasikara, ka manantanteraka izany ny eny ifotony.